Ikhaya » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zaseNigeria zokuhamba » Abaphathiswa bezokhenketho baseAfrika bagxininisa ukubaluleka kweenkcukacha-manani zokhenketho kumnyhadala we-UNWTO
Abaphathiswa bezokhenketho baseAfrika bagxininisa ukubaluleka kweenkcukacha-manani zokhenketho kumnyhadala we-UNWTO
“Iinkcukacha-manani zoKhenketho: iCatalyst for Development”, ibingumxholo wesemina yalo nyaka kwimeko yeNtlanganiso yama-61 yeKhomishini ye-UNWTO ye-Afrika (e-Abuja, eNigeria, ngomhla we-4 ukuya ku-6 kuJuni). Le ntlanganiso ibibandakanya nengxoxo yabaphathiswa ngokubaluleka kweenkcukacha-manani zokhenketho phantsi kwesihloko esithi “Better Better, Better Better”.
IKhomishini yase-Afrika yatsala abaphathiswa bezokhenketho abali-18 abavela kulo mmandla kunye nabadlali-ndima ababalulekileyo kwezokhenketho abavela kumazwe angama-36. Abathathi-nxaxheba bagxininise indlela iiprojekthi zokhenketho ezinokuthi zenze ngayo igalelo ekupheliseni ubuhlwempu, ukubaluleka kokufumana iindlela ezintsha zokuphuhlisa ukhenketho kwingingqi, kunye nesidingo sokufumana kunye nokukhuthaza ubudlelwane obutsha kunye nezixhobo zokuphuhlisa icandelo.
Ngokuchasene nomqolo wokukhula kokhenketho lwamazwe eAfrika, ifuthe loqoqosho lwezokhenketho kufuneka lilinganiswe ngokuchanekileyo ukuze izicwangciso zokhenketho zibe negalelo elifanelekileyo kuqoqosho lwesizwe. Incoko yabaphathiswa yathetha ngokubaluleka kokuqokelela kunye nokuhlanganisa idatha yobungakanani kunye nomgangatho, kunye nokubaluleka kokuzibophelela kwabachaphazelekayo kuzwelonke nakwintsebenziswano yamaziko kwinkqubo engqongqo yeenkcukacha-manani zokhenketho.
"Izinto eziphambili ngokubaluleka kwisigunyaziso sam zenziwe ngokumamela kwiimfuno zamazwe angamalungu ethu kwaye zibandakanya ekujoliswe kuko okubalulekileyo ekudaleni imisebenzi engaphezulu kunye nephucukileyo yezokhenketho, ukuphucula imfundo yezokhenketho kunye nokukhuthaza ukwenziwa kwezinto ezintsha", utshilo uNobhala-Jikelele we-UNWTO, uZurab Pololikashvili. "Kufuneka sakhe ubudlelwane obuluqilima phakathi kwamacandelo karhulumente nawabucala kwezokhenketho ukuguqula ukukhula kwilizwekazi liphela, kwaye kulungiselelwe abantu balo", wongeze watsho.
Intlanganiso ibizinyaswe nguMongameli waseNigeria, u-Muhammadu Buhari, othe "iNigeria inamandla amakhulu kwezokhenketho notyalo-mali", egxininisa ukubaluleka kweli candelo, kokubini malunga negalelo lalo kuphuhliso oluzinzileyo kunye nendima yalo yokuqhubela phambili ukwahlula uqoqosho kunye ukwandisa ukomelela kwezentlalo.
Kule meko, imfuno yokusekwa kweNkqubo-sikhokelo yeNkcukacha-manani yokuLinganisa uKhenketho oluZinzileyo (MST) yaqwalaselwa. Le Nkqubo-sikhokelo ibandakanya izinto zokhenketho kwezendalo, ezentlalo nezenkcubeko ezilungiselelwe ukufezekisa iiNjongo ezili-17 zoPhuhliso oluZinzileyo ze-Ajenda yowama-2030 yoPhuhliso oluZinzileyo.
Intlanganiso elandelayo yeKhomishini yase-Afrika izakubanjwa kwikota yesibini yowama-2019.